London Heathrow Airport Matenga ari Kuchinja Bhuruu muDutu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » London Heathrow Airport Matenga ari Kuchinja Bhuruu muDutu
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • UK Kuputsa Nhau
Sezvo nyika zhinji dzichirova nhanho dzekubaya majekiseni apo dzichichengetedza hutachiona hwakadzika, kuvhurwa kwemakambani ekutengesa akadai seCanada neSingapore kwakakosha kubhizinesi reBritain. Akadzimurwa ekutengesa mahukama anofanirwa kudzoreredzwa nekukurumidza kana iyo data ichibvumidza, uye UK Hurumende haifanire kunonoka idzi sarudzo dzakakosha.
LHR iri kutarisira kune dzimwe nguva
Kuwedzeredzwa kwekurambidzwa kwekufamba muna Chikunguru kwakakonzera kukwidziridzwa kwevafambi mu74% kana zvichienzaniswa naJuly 2020. Nekuvimba kwevatengi pakukwira, vanopfuura mamirioni 1.5 vafambi vakapfuura nemuHeathrow mwedzi wapfuura, zvichiratidza huwandu hwepamusoro hwevatakuri pamwedzi kubva munaKurume 2020. mumitemo yakapa kukurudzira kwakanyanya kudikanwa kuindasitiri yekufamba yeUK, uye yakagonesa vanhu muBritain kutarisira kutarisira kusangana kwezhizha kwakajairika nemhuri uye neshamwari kunze kwenyika.
Nhamba dzevatakuri vekuNorth America dzakakura neinenge 230% YoY, uye New York JFK yakadzorera nzvimbo yepamusoro senzira yaHeathrow inonyanya kufarirwa. Gare gare svondo rino Heathrow yakagadzirirwa kuwedzera kuwedzera kwayo transatlantic chipiriso, sezvo ichigamuchira American mutakuri jetBlue. Nechivherwa chevashanyi veUS zvizere vava kukwanisa kuenda kuUK pasina chikonzero chekuisa vanhu vega, rakabatana rekuBritain / US rekufambisa basa rinofanira kutora mukana weUK wekutungamira wekudzivirira hutachiwana uye kusvika chibvumirano chekudzora vafambi veUK vakazara.
Kunyangwe paine zviratidzo zvekudzoka, nhamba dzevatakuri dzichiri pasi pamusoro pe80% pane pre-denda muna Chikunguru 2019, sezvipingamupinyi pakufamba zvichiripo. Makurukota akazvipira kudzikisa mari yekuyedza pamusoro pemwedzi mitatu yapfuura, zvisinei, iyo UK ichakamira semutengesi neEurope ichirovera mitengo yavo uye mune dzimwe nguva ichivapa. Zvichakadaro, mutengo wekuyedza muUK unoramba uchitemesa vazhinji, seindasitiri inodaidzira kuti VAT ibviswe, padivi pekushandisa kwekutenderera kwakachipa kwenzvimbo dzine njodzi. Izvi zvinochengetedza vanhu vakachengeteka uye zvinodzivirira kufamba kunova kuchengetedzwa kwevapfumi.
Mavhiki maviri apfuura mutauriri wendege yeLHR akaudza eTurboNews , ivo London airport inoda kuti vachengetwe vanhu vafambe zvakare. Vakawana chishuwo chavo here?
Heathrow Chief Operating Officer, Emma Gilthorpe akati: “Pakupedzisira, kune mamwe matenga ebhuruu ari kumusoro, sezvo nzira dzekufamba nekutengeserana dzinovhurwa zvishoma nezvishoma. Basa racho harigere kupera. Hurumende ikozvino inofanirwa kutora chikamu chedziviriro uye kutora mukana wekutsiva bvunzo dzePCR dzinodhura nemitengo inodhura yekufamba kwenguva. Izvi zvichaita kuti kufamba kunoramba kuchiwanika kune vanhu vanoshanda nesimba veBrits, vanoshuvira kuwana mibairo yakanaka uye vanoshuvira kusangana zvakare nevadikanwi hwindo rekushanya kwezhizha risati ravhara. ”
Kune rimwe divi, hutachiona hwe COVID-19 muUK hausi kure nekukwira.
Tarisiro yepasi rose zvakadaro ichokwadi uye vazhinji vanoti zvinogona kutyisa.
Tichitarisa mhedzisiro yebhizimusi kuLHR London Heathrow airport ndege diki yebhuruu iri kuuya kuburikidza nedenga rine makore matema emheni-mhando.
(000s) Jul 2021 % Change Ndira kusvika
Jul 2021 % Change Aug 2020 kusvika
Asiri-EU Europe 124 27.5 433 -64.5 995 -72.4
muunganidzwa 1,511 74.3 5,359 -67.1 11,170 -78.0
Kufambisa Kwemhepo Kufambisa Jul 2021 % Change Ndira kusvika
Asiri-EU Europe 1,139 21.2 4,929 -56.7 10,480 -64.2
muunganidzwa 16,379 37.4 77,613 -40.0 149,078 -54.5
(Metric Matani) Jul 2021 % Change Ndira kusvika
Asiri-EU Europe 4,954 38.1 38,862 86.3 64,060 43.0
muunganidzwa 115,347 30.5 780,362 22.1 1,285,054 -0.4